Isigcawu sentlanzi: iimpawu kunye nokwenza ntoni ngesihlungu sayo | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha Isigcawu sentlanzi. Eli ligama eliqhelekileyo elinalo kwaye lelosapho lakwaTrachinidae. Igama layo lenzululwazi ngu Idrachinus draco kwaye njengaye Intlanzi yeengonyama, iintlanzi zamatye y Iintlanzi ze-Scorpion Inetyhefu. Kuyaziwa ngokubangela iingozi ebantwini kumalwandle angenzulu.
Kule posi siza kuthetha ngeempawu kunye nendlela yokuphila kwentlanzi yesigcawu. Siza kuphinda sixoxe ngendlela esiphatha ngayo ukulunywa yile ntlanzi inetyhefu. Ngaba uyafuna ukuyazi kakuhle le ntlanzi?
2 Umbala, ukutya kunye nendawo yokuhlala
3 Ukuzaliswa kunye neengozi zentlanzi yesigcawu
4 Yenza ntoni ityhefu?
Le ntlanzi ibonakala kakhulu ngokuziphatha kwayo kunye nexhoba layo. Into ayenzayo ukubothusa kukuzimela phantsi kwesanti kwaye angabonakali. Oku kwenza kube nzima kakhulu ukwahlula ngamehlo.
Ngokubanzi, iyintlanzi ehleli kakuhle kwaye ihlala emanzini akude ukuya kuthi ga kwi-50 yeemitha ubunzulu. Unokufumana iisampulu ezinobungakanani Ziqala ukusuka kwi-15 kuye kwiisentimitha ezingama-45 ubude. Kuxhomekeka kwindidi kunye nobudala, ubukhulu bunokwahluka.
Ngokubhekisele kwinkangeleko yayo, inomzimba ovulekileyo obunemilo ecinezelweyo. Umlomo wayo mkhulu njengenhloko. Uye wayinyusa kancinci ukuze abeke iliso kwixhoba lakhe ngelixa efihle esantini. Njengazo zonke iintlobo zehlabathi, i-morphologies iyaphucuka ukuze ikwazi ukuziqhelanisa nokusingqongileyo. Olu jiko lwentloko likuvumela ukuba ubone phantsi kwesanti.
Isiphelo sayo sokuqala somva sifutshane kwaye kulapho zifumaneka khona iingqumba zetyhefu ezisi-7. Njengokuba oku akwanelanga, inezinye izihluma ezingama-32 kumphambili wesibini wangasemva ityebile ityhefu eyitofa emva kokungenisa ameva esikhumbeni. Ngombulelo kula meva iyakwazi ukuzikhusela kwizilwanyana ezihlasela amarhamncwa ayo. Kusenokwenzeka ukuba bahlaselwe ngelixa bequbha, kuba kungenjalo bazimela esantini.
Umbala, ukutya kunye nendawo yokuhlala
Umbala wayo uluhlaza unamachokoza amnyama entloko kunye nemigca emthubi naluhlaza emacaleni. Le ntlanzi inemibala efihlakeleyo. Umbala ukuba zonke izilwanyana ezikwaziyo ukuzifihla zinazo. Umdlalo wee-shades eziluhlaza, amabala amnyama, mthubi naluhlaza okwesibhakabhaka ubenza ukuba bangabonakali embindini wolwandle. Oku kukunika inzuzo enkulu ngaphezu kweentshaba zakho.
Ngoku masithethe ngokutya kwabo. Ukutya okuphambili kwintlanzi yesigcawu yeyona ntlanzi incinci ifunyenwe elwandle. Utya nezinye ii-crustaceans. Ukuzingela ixhoba layo, izingcwaba entlabathini, iveza kuphela amehlo ayo. Iyakwazi ukulijonga ixhoba lalo ngokuchaneka okukhulu ngenxa yentloko yalo ethambekileyo. Inomonde omkhulu wokulinda ixesha elifanelekileyo xa ihlasela esinye isilwanyana.
Indawo yokuhanjiswa kwayo isuka emanzini aseMeditera ukuya kwiAtlantic. Indawo yokuhlala ifumaneka kwezo ndawo zinobuninzi besanti nodaka. Azifumaneki kwezinye iindidi zemali, kuba azinakufihlwa xa zizingela. Kuqheleke kakhulu ukuyifumana kufutshane nolwandle kubunzulu beemitha ezingama-50. Nangona kunjalo, ngamaxesha ehlobo banokubonwa rhoqo kumanxweme angenzulwanga nakufuphi nonxweme. Oku kubangela ezinye iingxaki ngabahlambi.
Ngenxa yokuba isanti eselunxwemeni ifanisa ubunzulu apho izingela khona, iyazimbela phantsi kwentlabathi ukulinda amaxhoba ayo. Xa umntu edada okanye ehamba kufutshane nonxweme kumanxweme angekho nzulu, ahlaselwa zezi ntlanzi. Ulwamvila luyityhefu njengoko siza kubona kamva.
Ukuzaliswa kunye neengozi zentlanzi yesigcawu
Kuba yindawo enkulu kakhulu, ngexesha lokukhwelana iba ndlongondlongo ngakumbi. Uhlaselo oluninzi olungakhange lubekho kubantu ababhukuda kunye nabatshatileyo kuye kwaxelwa. Kungenxa yokuba bacinga ukuba baya kungena kummandla apho bazala khona okanye badibana khona.
Iinyanga apho zivela khona zivela ngoJuni ukuya ku-Agasti. Ke ngoko, ingqamana nexesha apho kukho abahlambi abangakumbi kunye nothotho.
Nangona le ntlanzi ivela kulwandle oluvulekileyo kwaye ixhaphake ngakumbi emanzini afudumeleyo, utshintsho lwemozulu luyabachaphazela. Ubushushu behlabathi bukonyusa ubushushu obuphakathi emanzini olwandle. Ngenxa yoku, olu hlobo lushenxiswa kumanxweme. Kukho iingxelo ezingakumbi nangakumbi zokuhlaselwa kunye nokulunywa yityhefu kwesigcawu.
Ngokwesiqhelo ukuluma kwenzeka xa abahlambi benyathela ngaphandle kokubona. Kuya kufuneka ucinge ukuba intlanzi yesigcawu ingangcwatywa ngaphantsi kwaye ngaphandle kokuyiqonda, siyayinyathela. Uninzi lokonzakala lwenzeka kwindawo yokuqubha engalindelwanga okanye abalobi abanobuganga bokubamba i-spiderfish emanzini. Aba balobi abazi ukuba nokuba le ntlanzi yesigcawu ifile, ihlala ityhefu okwexeshana.
Yenza ntoni ityhefu?
Ityhefu yale ntlanzi ine-glycoprotein kunye nemvelaphi ye-vasoconductive. Njengoko kungabikho ntsholongwane, kuyacetyiswa ukuba ufumane unyango kwangoko. Ngaphandle koko inokudibanisa isenzo kunye neempawu kwaye ikhokelele kwiziphumo ezinokubakho. Phakathi kwazo kukho isilonda esibandayo, imveliso yokungabikho kwegazi.
Phakathi komonakalo onokubangela ukuba sifumane iintlungu kwindawo yokuluma, umkhuhlane, ukugabha, ukusilela kokuphefumla, ukuxhuzula kwezinye iimeko kunye nokusabela kolusu njengokukrala nokubomvu.
Eyona nto iphambili ekufuneka siyenzile kukuba silunywe yintlanzi yesigcawu.
Coca uze ubulale iintsholongwane enxebeni.
Yisuse ngesandla nayiphi na imiqolo ebonwayo.
Faka ubushushu kwindawo echaphazelekayo, ngokuyifaka emanzini ashushu kubushushu obungaphantsi kwama-45 ° C kangangemizuzu engama-30, ukunciphisa iintlungu.
Kuphephe ukubeka ingqele enxebeni, nangona abanye bekhusela le ndlela ukufumana indawo enetyhefu yi-vasoconstriction.
Gwema ukusetyenziswa kwee-tourniquets kunye nokuziqhelanisa nokuthintela ukusasazeka kwetyhefu.
Yiya kwiziko likaxakeka ukuze ufumane unyango.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso ungakuphepha ukulunywa yintlanzi yesigcawu kwaye uyinyange ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Isigcawu sentlanzi